Fishmeal: ukwakheka kanye isicelo
Imfuyo kanye nezinkukhu izinhlanzi ukudla wazibonela abalimi belulekwa ukuba uhlanganise okuphakelayo edingekayo. Lena mkhiqizo iyasiza, sandla ukusheshisa ukukhula kanye nokuthuthuka. Iqukethe omningi izinhlobo ezahlukene amavithamini izakhi mkhondo.
Phosphorus kanye selenium
Ayini izinto ezakha umkhiqizo ezifana nezinhlanzi ukudla, ezibhekwa ewusizo? Obuningi kakhulu izinhlanzi ukudla, njengazo zonke izilwane zasolwandle iqukethe phosphorus. Lo msuka ohilelekile cishe kuzo zonke izinqubo zokuphila kwezilwane. Nguye futhi ngesivinini ukukhula kwabo. Isici esiphawulekayo phosphorus ukuthi akukho zinsalela amuncwa wumzimba.
Okunye izinto eziqukethwe izinhlanzi ukudla - selenium - kuqinisa amasosha omzimba. Kuningi kwalesi sakhi trace e imidumba. Nokho, nenhlabathi ezweni lethu liqukethe kancane kakhulu. Ngakho, ukupha uphizi nobhontshisi izilwane, ayikuvumeli ukugcwalisa ngokugcwele. Lapha-ke eza ukusiza inhlanzi sakusihlwa.
Okuqukethwe amaprotheni zezinhlanzi ukudla
Amaprotheni izinhlanzi ukudla kakhulu - okungenani 60-65%. Futhi i ezibizayo futhi eliphezulu umkhiqizo - 70%. Le into ungumthombo amaprotheni. Esinye isici ebalulekile ke - amino acid. Basuke kudingwa umzimba ukwakha kwemisipha izicubu. Ngokuzimela, he cha khiqiza them. Ufulawa iqukethe ephumelela kunazo natural Amino acid: cysteine, methionine, lysine, threonine.
Fishmeal, okuyinto isakhiwo ivumela ngempumelelo ukuyisebenzisa kwezolimo, iqukethe ezilwane. Bona ngokuphelele umphelelisi isitshalo engena emzimbeni ngamakhambi, izithelo kanye nemifino. Ibhalansi kwesokudla lezi izinto zishukumisa ukukhiqizwa kwamasosha omzimba, okubangela izilwane mancane amathuba okuthi abantu bayagula kakhulu. Enye ezihlukahlukene izakhi mkhondo - polyunsaturated okunamafutha acid. Isiza ukuthuthukiswa hormone ekhethekile - progesterone. Yena, kuba nomphumela omuhle ekhonweni wesilwane nokuzala.
I digestibility wamaprotheni eziqukethwe izinhlanzi ukudla, kuphezulu kakhulu futhi imayelana 95%. Empeleni amaprotheni, njengoba umkhiqizo main, kuba kakhulu - cishe u-60%.
Ukwakheka kwamakhemikhali kwalo mkhiqizo zingatholakala kuleli thebula elingezansi.
Amavithamini izinhlanzi ukudla
Fishmeal, okuyinto isakhiwo ngokuya micronutrients ahlukahlukene kokuvamile, kuhlanganise ihlanganisa ngamavithamini A, D, B. Ukuphakelwa isitshalo okwanele. Sizwa ubuhlungu, ngokuphambene nalokho, kakhulu. Vitamin A kusiza ukukhula nokuthuthuka izilwane. Ubizwa abahileleke ngokuqondile ukwakheka kwamaseli amasha. Vitamin inkanuko nerve futhi kwemisipha umsebenzi futhi D ikhuthaza ukumuncwa phosphorus isilwane. ukuntula kwalo kungabangela yamathambo.
Fish ukudla, okuyinto abakhiqizi okwamanje ukudayisa umkhiqizo ngokwanele izinga ivumela ukwengeza okuphakelayo:
Ukuze luhambe ngokushesha uhlelo ukukhula nokuthuthuka imfuyo kanye nezinkukhu.
Ukuze kuqiniswe isimiso somzimba sokuzivikela ezifweni.
Thuthukisa ukuthuthukiswa Izinzwa bone izicubu. Lokhu kunciphisa ingozi sengozini ahlukahlukene lwamathambo.
Yisiphi isilwane fishmeal ewusizo
ewusizo kakhulu, isibonelo, ukunikeza izinhlanzi ukudla amaqanda laying izikhukhukazi. Lokhu kwandisa amaqanda esabekwa kubo. futhi evimbela ukuthuthukiswa zonke izinhlobo zezifo. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo kakhulu ngcono ikhwalithi amaqanda ngokwabo. Fishmeal, isicelo sakhe kwezolimo ingaphezu kulingane, ke livame ukusetshenziswa emkhakheni avalele ukulima. Ukondla yona izinkomo ukunciphisa lokucuketfwe fat ubisi. Futhi, inyama yezilwane ezisebenzayo njengalezi ihlukile elilungile amafutha kwengoma. Ngo noboya ukulima lo mkhiqizo kungaba ngcono ikhwalithi noboya. Kuyasita kakhulu onogwaja yakhe futhi nutria.
Kusukela lokho ufulawa umkhiqizo zokusetshenziswa
ukukhiqizwa Fishmeal - inqubo okudinga ukusetshenziswa imishini ekhethekile - .. Presses, zokuthutha, njll, kungashiwo ekhiqizwa kusuka cishe noma yikuphi izinhlanzi zasolwandle kwezohwebo. Nokho, ofanele kakhulu le njongo zilwane ezincane, okuyinto ngenhlanhla ngokuvamile asifanele ukudliwa abantu. Ukukhiqizwa kafulawa - omunye izinkomba esemqoka kule mboni yokudoba. Ukuze 1 ton kwalo mkhiqizo kumele kabusha cishe 5-6 amathani izinto zokusetshenziswa. Njalo ngonyaka emhlabeni wonke ekhiqizwa abangaba yizigidi ezingu-6.5 amathani wathi umkhiqizo ewusizo.
Izindlela ngokwenza fishmeal
Fishmeal ukukhiqizwa - inqubo eyenziwa ngezindlela ezilandelayo:
Ukucindezela kanye omiswe.
Centrifuge kanye omiswe.
oqondile omiswe indlela
Ukupheka izinhlanzi ukudla yenzeka izigubhu obukhethekile amaphini, bagqugquzela. Ngaphambi ukulayisha of indaba ochotshoziwe uyabaselwa lokushisa 85-90 c. Ekuqaleni thumba izinhlanzi cishe isigamu sehora. Hot processing time kuncike okuqukethwe lipid we feedstock. Ngemuva ukupheka sekuphelile, isigubhu is Umfutho, liyakhula kancane kancane. Isikhathi omiswe uqobo amahora ama-4, lapho inhlanzi ekuqaleni iqukethe 10-12% amanzi.
Ngemva kokudla usulungile, it esuswa mixer isigubhu kanye fed cindezela ukuze kususwe olungaphelele amafutha. I briquettes okuholela zigaywa e isigayo ekhethekile futhi idlule uzibuthe ukususa metal izinhlayiya ezincane ngothuli kuzibamba. ukudla Landelayo phama izikhwama noma amaphakethe nabanye futhi wathumela kuJehowashi ishede.
Kulokhu, ukukhiqizwa umkhiqizo ezifana nezinhlanzi ukudla okuphakelayo, inqubo esekelwe okuthiwa ziphuzo zazihluzwa azeotropic. Ikakhulukazi okwandile ayizange wathola. Isetshenziswa ikakhulukazi kuphela womshini fishmeal luyimbudumbudu. Ithole kuleli cala, izitshalo ezikhethekile usebenzisa imithi yokususa ingcekeza elenkani ezifana trichloroethane, utshwala isopropyl, hexane futhi dichloroethane.
Ukucindezela nokwesula indlela
Kulokhu, lo impahla eluhlaza sidla ku elihambayo endaweni hopper ekhethekile, futhi eminye - isitsha ukupheka. Ngemva ukwelashwa ukushisa lingena screw cindezela ukususa umswakama. Ezisele ngemuva pomace mass womile futhi phansi.
A ukuguqulwa le ndlela iyona Centrifuge kanye omiswe. Kulokhu, ngemva ukupheka izinhlanzi akezi ngaphansi cindezela, futhi ngendlela Centrifuge ekhethekile.
Ezisele ngemuva ukucutshungulwa izinto zokusetshenziswa kuzo zonke lezi zindlela umhluzi isetshenziswa ukwenza umkhiqizo owodwa ngaphezulu ewusizo kakhulu - namafutha kafishi. Futhi ngokuvamile ukungezwa kokudla kwezilwane. Kuyasiza kakhulu, ngokwesibonelo, i-amadada kanye amatshwele. Ukuthola uwoyela inhlanzi, izinyoni ezincane kakhulu ukubuyeka ogulayo, ngaphandle kwayo encishisiwe. Lo mkhiqizo, kanye ufulawa, zixutshwe inyama yenkukhu. abalimi abanolwazi Sisikisela oyi-buhlanjululwe ngamanzi ngokulingana 1: 2.
Ingabe ngenza ukudla izinhlanzi ngezandla
Abanye abalimi unesithakazelo umbuzo zendlela yokwenza inhlanzi ukudla ekhaya. Njengoba ubona, ubuchwepheshe ukukhiqizwa yayo akuyona kuyinkimbinkimbi, kodwa kudinga imishini ekhethekile. Ngakho-ke, yenze eyakho ngeke Cishe. Yebo, futhi izobiza umkhiqizo kuleli cala ezibizayo baningi ngisho nangaphezu kwezinwele uthenge.
Kwezinkambiso yokondla fishmeal izilwane ezihlukahlukene ezahlukene. Ngokwesibonelo, ubisi izinkomo kumele inikwe iphawundi ngosuku. Ekudleni yenkukhu kufanele kube 2-3%. Izinkukhu, namahansi kungenzeka spiked 7% okuphakelayo Imininingwane. Omningi izinhlanzi ukudla ukunikeza le nyoni, Nokho, akunakwenzeka.
Umkhiqizo kwabakhiqizi kuwufanele ukuthenga
Yenza fishmeal cishe kuwo wonke amazwe emhlabeni. Kuthathwa eliphezulu kakhulu ekhiqizwa e Chile nase Peru. Nokho, kufanele esidlweni esinjalo kuyinto ngempela eqolo. Ngakho-ke, abalimi yasekhaya bakhetha ukuthenga umkhiqizo kukhiqizwa eRussia. On izinga akusiyo wawungaphansi Chilean futhi wasePeru, futhi ngaleyo ndlela kufanele kube ishibhile.
Indlela ukugcina umkhiqizo
Uma ukudla izinhlanzi kugcinwa kahle, uzobe lipids oxidized, futhi okufakiwe kakhulu kunciphisa okuqukethwe amavithamini. Ngaphezu kwalokho lo mkhiqizo zingashintsha nomswakama. I manzi ikamelo yempuphu ngenkuthalo zimunce amanzi umusi, eyomile khulu - kunalokho, nika. nomswakama Optimum egumbini yokugcina kwalo mkhiqizo ubhekwa 60-70%. Kwezinye izimo, lokhu sibalo kungenzeka ethe xaxa. Nokho, noma kunjalo akufanele idlule 75%.
Ngakho, inhlanzi sakusihlwa - umkhiqizo, njengoba ungabona, ewusizo kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo engabizi. Akunzima ukwenza, kodwa ngaphandle kokusebenzisa imishini ekhethekile akwanele.
Feedstuff for onogwaja: Ukwakheka, izinhlobo nezilinganiso. Ukwakheka okuphakelayo okuphelele onogwaja ekhaya
Izifo garlic. Yini esiyaziyo ngala madoda?
USilo: ukwakhiwa kanye nemishini
Queen amavithamini - asparagus. Ungadliwa for wonke umndeni.
Umswakama uhlakazekile emva kokubeletha: yini okufanele ukwenze, yini okufanele uyenze? Bangaki ama-sutures baphulukisa ngemva kokuzalwa?
Indlela ukuhlanza namapomegranati, sizobe anifundise
Izakhiwo ezisebenzisekayo caloric abilisiwe udali
Yini engcono ophahleni - okwakhiwa ngalo la mabhodi noma ukungezwani? Yini lokukhetha?
Ukukhiqizwa kwamangqamuzana egazi welanga: ubuchwepheshe kanye nemishini
Umculi waseJapane udala izilwane ezimangalisayo emaphephandabeni ajwayelekile
British Suv Range Rover Supercharged: Ukucaciswa, ukubuyekezwa